Ogaden News Agency (ONA) – Hay’adaha Xuquuqul Insaanka oo Ka Dayriyay Xaalada Itoobiya.
Hay’adaha Xuquuqul Insaanka oo Ka Dayriyay Xaalada Itoobiya.
Hay’adaha xuquuqul insaanka ayaa waxay ka dayriyeen xaalada Gumaysiga Itoobiya war qoraal ah oo ay soo saareen Hay’adaha Xuquuqul Insaanka ee Horn of Afrika, Human Right Watch iyo Hay’ado kale oo caalami ah ayaa waxaa lagaga dayriyay xaalada Itoobiya waxayna aad u dhaliileen xukunka deg dega ah ee lagu soo rogay guud ahaan ba wadanka.
Hay’adahan ayaa waxay sheegeen in xalku uunsan ku jirin in xukun deg deg ah wadanka lagaliyo ayay yidhaahdeen ee uu xalku ku jiro in laga wada hadlo sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda banii’aadamka. Hay’adahan ayaa waxay sheegeen mudada xukunkan deg deg ah uu socdo inay dhici karaan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo in la ilaalin waayo xoriyatul qawulka.
Hay’adahan ayaa sidoo kale sheegay inay talaabo fiican tahay maxaabiistii dhawaan laga sii daayeen xabsiyada sidoo kalena loo baahan in intaas ka badan laga sii daayo xabsiyada si dhinacyada ishaya ay isugu soo dhawaadaan.